Beesha Caalamka oo soo dhoweysay shirka wadda-tashiga doorashooyinka ee 15-ka bishan – Kalfadhi
Beesha Caalamka oo soo dhoweysay shirka wadda-tashiga doorashooyinka ee 15-ka bishan
February 13, 2021 February 13, 2021 Hassan Istiila
Saaxiibada Beesha Caalamka ayaa soo dhoweeyay kulanka madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah (DGXF), kaas oo la qorsheeyay in uu qabsoomi doono 15ka Febraayo si loo dhameystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17kii Sebtembar.
“Saaxiibada caalamku ma aaminsana in su’aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanyo ay cudurdaar u noqoto dib-u-dhac kasta ee ku yimaada shir-madexeedkan muhiimka ah. Waxaan ku boorinaynaa madaxda Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada, iyagoo ku shaqaynaya ku wada shaqwynaya niyad wax lagu dhisayo, inay xalliyaan arrimaha yar ee ka harsan wadahadalladii Dhusamareeb isla markaana ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban kaas oo lagama maarmaan u ah hirgelinta Heshiiskii 17kii Sebtembar.”
“Waxaan aaminsannahay inay muhiim tahay in wadahadaladii ka soo billowday Dhusamareeb si dhakhso leh looga mira-dhaliyo marka la guda-galo wada-hadalada soo socda. Waxaan ku dhiirigelineynaa madaxda DFS iyo DGXF ee ka qaybgelaya shir-madaxeedka inay si joogto ah ula xiriiraan oo ay ula tashadaan saamillayda kale ee Soomaaliyeed si wada-hadadalladu u noqdaan kuwo laga baaraan-degay.”
Golaha Wasiirada Jubbaland oo maanta Baarlamaanka u gudbiyay saddex xeer oo ay ansixiyeen
Baarlamaanka Hirshabelle oo ansixiyay Guddiyo muhiim ah